Galmudug oo cambaareysay Qarax ka dhacay Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Galmudug oo cambaareysay Qarax ka dhacay Gaalkacyo
War-saxaafadeed ka soo baxay Dowlad Goboleedlka Galmudug ayaa lagu cambaareeyay Qarixii maanta ka dhacay Magaalada Gaalgacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Galmudug ayaa u qornaa sidan:-
Dowlad-goboleedka Galmudug waxa ay ka tacsiyeyneysaa geeridii maanta ku timid allaha u naxa riistee Saraakiishii ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan Ururka Guul wade Gobolka Mudug oo kooxo dhagar qabayaal ah maanta ku dileen qarax miino oo ka dhacay meel lagu qaxweeyo oo ku taala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Dowlada Goboleedka Galmudug waxa ay Cambaareyneysa cid kasta oo ka danbeysay falkaan foosha xun laguna dilay Saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka, gaar ahaan Ururka Guul-wade ee dagan gobolka Mudug, waxaan codsaneynaa in Cadaaladda la hor keeno Cid kasta oo falkaan raad ku yeelata laguna sameeyo baaritaan dhab ah.
Saraakiisha dhimatay waxaa ka mid ah allaha u naxariistee Taliyihii Ururka Guul wade Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed G/Sare Xoreeye, laba ka tirsan saaraakiil ciidan iyo labo ka mid ah Askarta Dowladda.
Waxaan geeridaan xanuunka badan iyo murugadeeda la qeybsaneynaa dhamaan Eheladii iyo Ciidmada xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana allaah uga baryeynaa in uu Naxariistiisa ka waraabiyo .
Faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay Gaalkacyo